Nijaly teo Amin’ny Tsato-kazo Nefa Tsy Nanan-tsiny | Fiainan’i Jesosy
Nijaly teo Amin’ny Hazo Fijaliana Ilay Mpanjaka Tsy Manan-tsiny
MATIO 27:33-44 MARKA 15:22-32 LIOKA 23:32-43 JAONA 19:17-24
NOFANTSIHANA TEO AMIN’NY HAZO FIJALIANA I JESOSY
NESOESOINA IZY NOHO ILAY SORATRA TEO AMBONIN’NY LOHANY
NAMPANANTENA FIAINANA MANDRAKIZAY AO AMIN’NY PARADISA ETO AN-TANY I JESOSY
Nentina novonoina tany amin’ny toerana iray tsy lavitra ny tanàna i Jesosy sy ny jiolahy roa. Nantsoina hoe Golgota na Ikarandoha ilay toerana, ary tazana avy lavitra.—Marka 15:40.
Nesorina ny akanjon’izy telo lahy ary nomena divay niharo miora sy zava-mangidy izy ireo. Toa vehivavy tao Jerosalema no nanamboatra an’io ranon-javatra mampitony fanaintainana io. Navelan’ny Romanina hisotro azy io ny olona hovonoina ho faty. Tsy nety nisotro anefa i Jesosy rehefa avy nanandrana an’ilay izy. Nahoana? Te hahatsiaro saina tsara izy mandritra an’io fotoam-pitsapana lehibe io, mba ho afaka ny tsy hivadika hatramin’ny farany.
Natsotra teo amin’ny tsato-kazo i Jesosy. (Marka 15:25) Nofantsihan’ny miaramila ny tanany sy ny tongony ka rovitra ny nofony sy ny hozany ary nanaintaina be. Vao mainka nanaintaina izy rehefa natsangana ilay tsato-kazo, satria nisintona nidina ny vatany ka nitatra ny ratrany. Tsy nanome tsiny an’ireo miaramila anefa i Jesosy. Nivavaka kosa izy hoe: “Ray ô, mamelà azy ireo, fa tsy fantany izay ataony.”—Lioka 23:34.
Fanaon’ny Romanina ny mametaka takelaka milaza ny helok’ireo voaheloka ho faty. Izao no nasain’i Pilato nosoratana: “Jesosy avy any Nazareta, Mpanjakan’ny Jiosy.” Nosoratana tamin’ny teny hebreo sy latinina ary grika izy io, ka afaka namaky azy io ny ankamaroan’ny olona. Hita amin’izany fa tena tsy tian’i Pilato ireo Jiosy nitaky ny hamonoana an’i Jesosy. Tsy faly ny lehiben’ny mpisorona ka niteny hoe: “Aza soratana hoe ‘Mpanjakan’ny Jiosy’, fa hoe: Izy no nilaza hoe: ‘Mpanjakan’ny Jiosy aho.’ ” Tsy nanaiky hanao izay tian’izy ireo intsony i Pilato ka namaly hoe: “Izay voasoratro dia voasoratro.”—Jaona 19:19-22.
Tezitra be ny mpisorona ka naveriny indray ilay fiampangana diso tany amin’ny Fitsarana Avo Jiosy. Tsy nahagaga raha nihivingivin-doha ny mpandalo sady nanevateva an’i Jesosy hoe: “Tsara ho anao izao ry ilay te handrodana ny tempoly sy hanorina azy ao anatin’ny telo andro! Vonjeo ny tenanao ka midìna avy eo amin’ny hazo fijaliana.” Nifampiresaka koa ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna hoe: “Aoka hidina avy eo amin’ny hazo fijaliana izao i Kristy Mpanjakan’ny Israely, mba ho hitantsika ka hinoantsika.” (Marka 15:29-32) Na ireo jiolahy teo ankavian’i Jesosy sy teo ankavanany aza nandatsa azy. I Jesosy anefa no tena tsy nanan-tsiny tamin’izy telo.
Nanao an’i Jesosy ho fihomehezana koa ireo miaramila romanina efatra. Nisotro divay marikivy angamba izy ireo ary natolony an’i Jesosy izany mba hanesoana azy. Mazava ho azy fa tsy afaka nandray sy nisotro an’ilay izy i Jesosy. Niresaka momba an’ilay soratra teo ambony lohan’i Jesosy izy ireo, ka nanaraby azy hoe: “Raha mpanjakan’ny Jiosy ianao, dia vonjeo ny tenanao.” (Lioka 23:36, 37) Mba eritrereto ange e! I Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, nefa nampijalina sy natao tsinontsinona izy. Tena tsy mendrika an’izany izy. Nahavita niaritra anefa izy ary tsy nisy nomeny tsiny na ireo Jiosy nijery azy teo, na ny miaramila romanina naneso azy, na ireo jiolahy roa teo anilany.
Nalain’ny miaramila efatra ny akanjo ivelan’i Jesosy ary nozarainy efatra. Nanao antsapaka izy ireo mba hahalalana hoe ho an’iza ny ampahany tsirairay. Tena tsara ny fitafian’i Jesosy anankiray, satria “tsy nisy zaitra, fa tenona iray ihany hatrany ambony ka hatrany ambany.” Hoy ireo miaramila: “Aleo tsy horovitintsika ity, fa andao isika hanao antsapaka hahitana izay hahazo azy.” Tanteraka àry ny voalazan’ny Soratra Masina hoe: “Nifampizaran’izy ireo ny fitafiako, ary nanaovany antsapaka ny akanjoko.”—Jaona 19:23, 24; Salamo 22:18.
Takatry ny iray tamin’ireo jiolahy taorian’izay hoe tena mpanjaka i Jesosy. Nibedy an’ilay namany izy hoe: “Mbola tsy matahotra an’Andriamanitra ihany ve ianao amin’izao ianao efa voaheloka izao? Rariny isika raha melohina, satria mendrika handray ny valin’asantsika, fa izy kosa, tsy mba nanao zavatra tsy nety.” Niangavy an’i Jesosy izy avy eo hoe: “Jesosy ô, tsarovy aho rehefa tonga any amin’ny fanjakanao ianao.”—Lioka 23:40-42.
Namaly i Jesosy hoe: “Lazaiko aminao marina tokoa anio fa hiaraka amiko any amin’ny Paradisa ianao”, fa tsy ao amin’ilay Fanjakana. (Lioka 23:43) Tsy mitovy amin’izay nampanantenain’i Jesosy ny apostoliny izany. Nampanantena mantsy izy fa hiara-manjaka aminy ao amin’ilay Fanjakana izy ireo. (Matio 19:28; Lioka 22:29, 30) Jiosy io jiolahy io ary nety ho efa reny ny momba an’ilay Paradisa an-tany nomen’Andriamanitra ho fonenan’i Adama sy Eva sy ny taranany. Lasa nanana fanantenana àry ilay jiolahy talohan’ny hahafatesany.
Nahoana i Jesosy no tsy nety nisotro an’ilay divay nomena azy?
Inona ilay soratra napetaka teo ambonin’ny lohan’i Jesosy? Inona no nataon’ny Jiosy rehefa nahita azy io?
Nataon’ny miaramila inona ny akanjon’i Jesosy, ary inona no faminaniana tanteraka tamin’izay?
Inona no nampanantenain’i Jesosy ny iray tamin’ireo jiolahy?
Maro no mieritreritra hoe ny lakroa no tena famantarana ny Fivavahana Kristianina. Tokony hampiasaina amin’ny fivavahana ve izy io?
Hizara Hizara Nijaly teo Amin’ny Hazo Fijaliana Ilay Mpanjaka Tsy Manan-tsiny